Farriinta taabashada ee Boqoradda waxay ku salaantahay Boqortooyada Boqortoyada sedex qosol - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Farriinta taabashada ah ee Boqoradda ee loo dirayo askarta ku amaaneysa karaamadiisa leh seddex farxad
La reine Waxaan aqoonsaday jacaylka iyo ixtiraamka ay askarta Ingiriiska ku siinayeen Maalinta Xusuusta ee Royal British Legion, oo ay ka soo qeybgashay xalay. dhowr royals sare ah. Ka dib markii qof walba oo jooga Royal Albert Hall ee London uu kacay inuu ku heesto Ilaah Badbaadinta Boqoradda, militariga masraxa si shaqsi ah ayuu u salaamay boqorka.
Iyada oo ay iiddii xafladu dhammaatay, ayay millatarigu salaanta boqoradda ku salaamayeen saddex farxad
Boqortooyada, oo dhoola cadeynaysa, ayaa ku jawaabtay cod iyo mowjad.
Ku xigta iyada, Prince Charles dhoola cadeeyay sidoo kale. , isagoo ku raaxeysanaya fanaaniinta naxariis ee u hibeeyay hooyadiis.
Maalinta Xusuusta ee Shalay ayaa xustay sannad-guuradii XNUM-aad ee Xarumaha Isgaarsiinta ee Dowladda (GCHQ), iyo sidoo kale sannad-guuradii XNUM ee qaar ka mid dagaalladii ugu muhiimsanaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo ay ka mid yihiin dagaalladii ka dhacay Monte Cassino, Kohima iyo Imphal.
Boqoraddu si diiran ayay ugu mahadcelineysaa militariga kadib markay ugu hambalyeysay sedex munaasabadood (Image: BBC)
Boqoradda waxay aqoonsan tahay jaceylka iyo ixtiraamka ay askarta Ingiriiska u hayaan iyada munaasabaddii shalay (Sawirka: BBC)  Boqoradda waxaa ku hareereysanaa xubno ka tirsan qoyska xafladda, oo uu ku jiro Amiir William Prince Harry iyo naagahooda, Kate, Duchess of Cambridge iyo laga bilaabo Meghan Markle ee Duchess of Sussex.
Markii ugu horreysay bilo, Royal Fab አራት ayaa ka wada muuqda ka qeybqaadashada dadweynaha.
Si kastaba ha noqotee, lammaaneyaashu aad ayey u kala fog yihiin, iyadoo Cambridges ay fadhiisanayso dhinaceeda boqoradda iyo Sussex dhabarka. Go'aanka sababtoo ah booska kaladuwan ee royals ee safka xiga ee carshiga.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Meghan waxay ku biirtay Sophie Wessex si ay u xuso Axaddeeda labaad ee Xusuusta
Kate iyo Amiir William oo ka qeyb galaya Bandhigga (Sawirka: GETTY)
Markii ugu dambeysay oo afarta royals lagu arkaayo meel fagaare ah waxay ahayd bishii Juun ee Trooping the Color, xafladda lagu xusayay sannad-guurada rasmiga ee boqoradda.
Kulanku wuxuu dhacay bil kadib markii Duke of Sussex uu furay heshiiskii walaalkiis ee Harry & Meghan: Safarka Afrika.
Isagoo la hadlaya Tom Bradby, Amiir Harry wuxuu sheegay inuu "kusii nagaan doono xafladda". waxaa jira walaalkiis, laakiin wuxuu qirey inay hadda ku jiraan "wado kale".
Wuxuu yidhi: "Qayb ka mid ah doorkaas iyo qaar ka mid ah shaqadaas, qoyskan, iyadoo la hoos imanayo cadaadis kicinaya, waxaa jira waxyaabo aan laga maarmi karayn inay socdaan," ayuu yidhi.
Boqortooyada Midowday (UK) way aamusantahay madaama Amiir Charles hogaaminayo geesiga geesiyaasha [PIC]
Xoghayihii hore ee Saxaafadda Boqortooyada Denounces Crown ee soojeedinta Ganacsiga [Aragti]
Camilla waxay diiday in ay seego adeegga Xusuustii Axadda [PIC]
Amiir Harry iyo Meghan kuma fadhiyin Kate iyo William xafladda (Sawirka: GETTY)
Boqoradda waxaa hareereeyay xubno ka mid ah qoyskeeda Munaasabadda (Sawirka: GETTY)
"Laakiin fiiri: annagu walaalo ayaan nahay, waligeen walaalo ayaan noqon doonnaa.
Xaqiiqdii waxaan ku jirnaa dariiqyo kala duwan hada, laakiin waxaan markasta joogi doonaa isaga, sida aan ogahayna inuu waligey ila joogi doono.
Midba midka kale uma aragno sidii waagii hore sababtoo ah aad ayaan mashquul u nahay, laakiin aad ayaan u jeclahay. Waxyaabahan badankood [saxaafada] waxaa lagu abuuray wax aan jirin, laakiin sida walaalo, waxaad ogtahay inaad maalmo fiican leedihiin, waxaad leedihiin maalmo xun.
Dukumiintiga ayaa ka tagay Amiir William "ka walwalsan" Harry iyo Meghan, sida laga soo xigtay ilo Kensington Palace oo la hadlay BBC.
Haweenka Royal iyo sharaftooda ciidan (Image: EXPRESS)
Xubnaha reerka boqortooyadu ma ahayn dadwaynaha kaliya ee goob joog ka ahaa, oo ay ka mid yihiin Raiisel wasaare Boris Johnson, lammaanaheeda Carrie Symonds iyo Xoghayaha Arimaha Dibada Emily Thornberry.
Hogaamiyaha Mucaaradka Jeremy Corbyn ma uusan soo xaadirin Fasaxa - go'aan ay dad badan oo adeegsada warbaahinta bulshada ay aad u soo jiiteen.
Waxaan ku soo qoray Twitter: "Waa wax laga xishoodo, Jeremy Corbyn iyo John McDonnell dhib kuma noqon karaan inay xasuustaan ​​geesiyaasheena dambe.
"Xusuusnow markii aad u tageyso inaad codeyso, 12 december.
Amiir Charles iyo Camilla xafladda (Sawirka: GETTY)
Un autre a déclaré:" Corbyn ... Quelle honte totale. Je suis tellement en colère.
«La famille royale, Boris Johnson et d’autres dignitaires réunis au Royal Albert Hall pour le festival du souvenir de la Royal British Legion.
« Corbyn ne devrait pas être autorisé à diriger le parti travailliste. Mettez-le à la porte maintenant. "
PHOTOS. Meghan Markle iyo Kate Middleton, oo xarrago u ah Axadda Xusuusta: sababta ay